Qaramada Midobay oo war ka soo Saartay Duufaano ku soo Fool leh dalalka Gobolka – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2015 2:58 b 0
Isniin, Oktoobar 26, 2015 (Daljir) —Hayadaha arimaha bini’aadanimada ee Qaramada Midoobay ayaa doonaya dhaqaalo gaaraya 451 Milyan oo doolar oo ay sheegeen iney kaga hortagayaan saameynta ka dhalan karta roobabka iyo dabeylaha El Nino taasi oo laga baqayo iney dad badan saameyn ku yeelato.
Hayahadaha Qaramada Midoobay ayaa sheegay in roobabka iyo dabeylaha is watta laga baqayo iney saameeyaan ku dhawaad 2.7 ilaa 3.5 Milyan oo ruux oo ku sugan bariga qaarada Africa, sida hayada ay sheegtay.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska isku dubaridka arimaha bini’aadanimada ee UN OCHA ayaa lagu sheegay in wadamada gobolka ku yaala u nugul yihiin daadad iyo abaaaro ka dhasha roobabka iyo dabeylaha laga baqayo.
“Ku dhawaad 451 Milyan oo doolar ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo u diyaarsanaanta iyo ka jawaabida saameynta ka dhalata Elnino oo laga baqayo iney ku dhifato Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya”sidaasi ayaa lagu sheegay qoraalka UN OCHA.
Dhaqaalahaasi ayaa lagu sheegay in wax badan loogu qaban doono dadka ay saameyso dabeysha Elnino, iyadoo marar badan dhibaatooyin kala duwan ay soo wajaheen dalalka ku yaala bariga qaarada Africa.